Alec Baldwin ma u tartami doonaa Donald Trump madaxweynaha? - dadka - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Alec Baldwin ma tartan donaa Donald Trump madaxweyne? - dadka
Alec Baldwin ma u tartami doonaa Donald Trump madaxweynaha? - dadka
Maaha madaxweyne, laakiin wuxuu ciyaaraa hal telefishan.
Laakiin hadda, Alec Baldwin wuxuu u maleynayaa in uu runtii noqon doono madaxweyne wanaagsan, ama ugu yaraan ka wanaagsan yahay Donald Trump. Isniintii, jilaa wuxuu u gudbiyay wicitaan Twitter ah inuu weydiisto macaamiishiisa macaamiisha haddii uu isku dayi lahaa inuu ku guuleysto Aqalka Cadaanka ee 2020.
"Ma weydiin doono doollar," ayuu tweetey. "Waxaan balanqaaday inaan ku guuleysan doono. Beat Trump waa mid aad u fudud. Sidaas fudud. Sidaas fudud. "
Haddii aan u orday madaxtinimada, ma ii codayn lahayd?
Ma weydiin doono doollar.
Oo waxaan idiin ballanqaaday inaan guulaysan doono.
Beat Trump waxay ahaan laheyd mid fudud.
- HABFondation (@ABFalecbaldwin) 8 April 2019
Waxay u egtahay inuu weli ku jiro doorka "Night Night Live" sida Trump, doorka carbinta Baldwin dib ugu soo noqotey.
Madaxwaynaha madaxweynaha ayaa sidoo kale la yaabay xanaaqii Trump. Sida Washington Post Trump iyo Baldwin waxay ahaayeen gawaarida ganacsiga tan iyo markii uu jilaa bilaabay sawirada Trump, musharaxa madaxweynenimada GOP, SNL "2016".
Trump ayaa sheegay in Baldwin ay kufaraxsan tahay isaga "way dillaacday" iyo in actarka uu leeyahay "shaqo liidata liita. "Trump ayaa sidoo kale si gooni ah loo weeraray" SNL ".
"Waxba kuma riyoonayo habeenkii sabtida ee Daalibaanka NBC! Trump tweeted mar. "Su'aashu waa sidee shabakadaha ay ula shaqeeyaan wadarta guud ee shaqooyinka Jamhuuriga iyada oo aan la ciqaabin? Sidoo kale tusmooyin badan oo kale? Aad ayaan u xunahay waana in la baaraa. Tani waa khilaaf dhabta ah! "
Baldwin, qaybtiisa, weligiisna kama qarin quwadiisii ​​Trump. Wargeyska Isniinta ayaa aheyd markii ugu horeysay ee uu ku hanjabay in uu ku ordi doono 1600 Pennsylvania Ave. Waxa uu horay u soo muuqday SiriusXM's "Howard Stern Show Show" isaga oo sheegay in uu ahaa "at 1 000%" inuu hubiyo inuu ku boodi karo Trump.
"Haddii aan orday, waan ku guuleysan lahaa," ayuu u sheegay Stern. "Dhamaanteen waan ku guuleysan lahaa."
Dad badan oo ku jira Twitterka ayaa diiday. Halkan waxaa ah jawaabaha Baldwin ee Twitter:
"LOL! Way adagtahay inaad u sheegto farqiga u dhexeeya xaqiiqda iyo dhaqanka marka aad samaysay muddo dheer, huh. Si fiican u joog waxa aad sameyso waxa ugu fiican ... iska dhig inaad ciyaareyso. Hadday hindhistahaaga hoose ee sheeganayo inuu sheegayo inuu baxayo, waxaa jira had iyo jeer ilaalo xuduudaha ah ee dugsi hoose. "
"Waxaan ku tuuri doonaa 100%. Jahannamo, waxaan kuu soo qoray qayb ka mid ah suugaankeyga. Laakiin waligay kuma codayn doono. Waqtigaas ayaa iminka socda waayo dawlad caafimaad leh oo qibrad leh oo qibrad leh. Anigu ma arkin in aad ka. "
"AB, Anigu ma codeyneyno sida eey-qabasho. Sidaas nasiib wacan. "
"Sida madax banaan, shaki kuma jiro inaanan ku codeyneynin, xitaa haddii aad tahay musharax keliya. Haddii ay lahaayeen codad aad u xun oo Hollywood ah, waxaad ku guuleysan laheyd dhul gariir. Waxay noqon laheyd weyn haddii aad ku orodo. Waxaad arki doontaa inta Maraykanku kuguma caawin karo! "
Kadibna waxaa jiray qiimeyntan gaaban:
"Nah baan ahay"
"Maya ciyaal dheeraad ah"
"Taasi waa maxay @HillaryClinton"
Ma cadda in Baldwin uu akhriyay qaar ka mid ah faallooyinka ugu liita marka uu sii wato bogga Twitter-ka: "Tweets ayaa ii oggolaanaya inaan badbaadiyo malaayiin doolar oo codadka ah.  Tweets waxay ii badbaadineysaa malaayiin doolar ee codadka.
- Habbooni (@ABFalecbaldwin) 8 April 2019
Baldwin, dabcan, ma ahan midka ugu horeeya ama shakhsiyaadka telefishanka si uu u hirgeliyo Aqalka Cad. Laakiin miyuu u qalmaa?
Miyuu kala saari karaa asalka orodka? Miyuu og yahay meeshii aabbihii ku dhashay? Miyuu xirxiran karaa dherer macquul ah? Dabcan, kuwani waa su'aalaha ugu fudud ee laga yaabo in lagu weydiiyo inay ka jawaabaan.
Laakiin haddii Baldwin uu orday oo ku guuleystay 2020, waxaan u maleyneynaa in "SNL" ay tahay inay bixiso ereyga ugu horeeya si uu u sharaxo lambarka 46. Waxay noqon lahayd caddaalad kaliya.
Dad: Daacad? Xaas aan ku lahayn da'da 47, Alexandra Lamy wuxuu ka baqayaa inuu noqdo "addoon gabow ah"
Marka ganacsiga u muuqda inuu u shaqeynayo Serge Beynaud